Muhaajiriin ay Soomaali kamid yihiin oo maxkamadeyn lagu bilaabay
Shaqsiyaadkan ayaa loo haystaa fal-dambiyeed la sheegay in uu ka dhashay burbur dhaqaale.
VALLETTA, Malta – Dowladda Malta ayaa la sheegay in bilowday in ay maxkamadeyso 18 muhaajiriin ah kuwaasoo ay qaar Soomaali yihiin. Shaqsiyaadkan waxay maxkamadda kasoo muuqdeen Jimcaddii lasoo dhaafay.
Sidda ay warisay saxaafadda, waxaa dhamaantooda loo haystaa rabshaddo Arbacadda todobaadkii hore ka dhacay magaaladda Hal Far halkaasoo la sheegay in ay ku waxyeeleeyeen hanti malaayiin Yuuroo ku kaceysa.
Soogalootiga oo la sheegay in ay maxkamadda ka hor-qirteen dacwadda lagu soo oogay ayaa kasoo kala jeeda wadamo ku yaala qaaradda hodanka ah ee kala ah; Mali, Ivory Coast, Somalia, Sudan, Guinea iyo Gambia.
Hasayeeshee, qareenkooda Martin Fenech ayaa ku difaacay in muhaajiriinta ay banaanbaxayeen isla markaana. Balse dacwad-oogeyaasha waxay ku doodeen in banaanbaxayaashu aysan dhibaato u geysan hanti.
"Maxkamadda waxay baahan tahay in ay kala saarto rabashado iyo banaanbax," ayuu Martin kusoo uruuriyey doodiisa difaacida qaxootiga.
Frendo Dimech, garsooraha maxkamadda, ayaa sheegay in xukunka lagu ridi doono shaqsiyaadkan ay ku qiimeyn doonan cadadka burburka hantiyadeed oo ay geysteen, wallow uusan muddeyn waqtiga xukunka.
Balse wuxuu carabka ku dhuftay in ay muteysan karaan inta u dhaxeysa hal sano, saddex sano, 22 bilood ama afar sano oo xarig ah.
Malta ayaa kamid ah dalalka ku yaala qaaradda Yurub ee sidda weyn u soo dhaweeya magan-galyo-dooneyaasha Soomaalida kamid tahay, balse waxaa aad u adag shuruucdan qarankan taasoo dhibaato kala kulmaan.
Malta oo dacwad kusoo oogtay Soomaali 23-sano jir ah
Soomaliya 02.12.2019. 17:25
Kinaan Cabdinaasir Nuur oo diidey damaanad kusii deyn ayaa ganafka ku dhuftay eeda loo jeediyey.
Shaqsi Soomaali ah oo si arxan daran loogu dhaawacay Malta
Soomaliya 24.11.2019. 06:48
Soomaali toorey "ku weeraray" shaqsi Itoobiyaan ah oo xabsi loo taxaabay
Caalamka 16.10.2020. 18:25
Askari dhaawacay magan-galyo doon Soomaali ah oo la dacweeyay
Soomaliya 20.09.2020. 07:05
Kenya Airways oo shaacisay in ay hakisay duulimaadyadda Muqdisho
Afrika 08.08.2020. 12:20
Farmaajo oo dhagax dhigay dib-u-dhiska Madxafka Qaranka [Sawirro]
War Saxaafaded 09.12.2018. 15:02
Nin sababay geerida Soomaali oo lagu xukumay 40-sano oo xarig ah
Caalamka 05.08.2020. 18:20